Xulka Italy Oo Wacdaro Ka Dhigay Tartanka Nations League
HomeHoryaalka ItalyXulka Italy oo wacdaro ka dhigay tartanka Nations League
November 19, 2020 Horyaalka Italy, Wararka Ciyaaraha 0
Talyaanigu wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareed kale oo cajiib ah markii ay gaareen finalka Nations League waxayna sii dheereysteen rikoorkooda guuldaro la’aanta 22 kulan iyagoo 2-0 ku garaacay Bosnia Arbacadii. Andrea Belotti ayaa jabiyay ismari waagii daqiiqadii 22-aad halka Domenico Berardi uu ku daray kii labaad kubad qurux badan bartamihii qeybtii labaad ee ciyaarta iyadoo Talyaanigu kaalinta koowaad kaga soo baxay Group A1 oo leh 12-dhibcood lix kulan oo uu ciyaaray.
Talyaanigu wuxuu mar kale tabay tababare Roberto Mancini ka dib markii uu tijaabiyay COVID-19 iyo sidoo kale dhowr ciyaartoy oo muhiim ah oo ay ku jiraan daafacyada dhaawacmay Giorgio Chiellini iyo Leonardo Bonucci, iyo weeraryahan Ciro Immobile oo la xiriira COVID-19.
Bosnia, oo mar hore u dhacday heerka labaad, waxaa ka maqnaa Ibrahim Sehic, Sead Kolasinac iyo Edin Dzeko ka dib markii laga helay COVID-19. “Tababaraha wuxuu rabaa inaan ku ciyaarno kubadeena meel kasta oo aan aadno waana maskaxda aan si dhab ah u qaadanay” ayuu yiri ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Italy Lorenzo Insigne. Funaanaddan waa in la sharfaa mar kasta, waxaanna u siineynaa wax walba wixii aan u qabannay Talyaaniga.
Ciladdii ugu weyneyd ee Talyaanigu wuxuu ahaa guuldaradii ka soo bixi weyday fursadahoodii, Belotti ayaa laba jeer khasaariyey ka hor inta uusan dhalin goolka. Insigne, oo xarig ka toogtay birta dabayaaqadii qeybtii hore.
Goolka labaad wuxuu ahaa mid cajiib ah iyadoo Manuel Locatelli uu kubad kor uga qaaday daafacayada Bosnia iyo saaxiibkiis Sassuolo Berardi ayaa ku hubsaday shabaqa.